Yini engiyidingayo mayelana nesayithi lami ukuze ngithuthukise injini yami yokusesha ukuze ngiphumelele?
Wake wazibuza ukuthi yini i-SEO eshoyo? Yiqiniso, abaningi bethu bangafunda incazelo ejwayelekile yaleli gama ku-Google. Nokho, i-SEO isho izinto ezahlukene kubantu abahlukene. Ngenkathi abanye abanikazi bewebhu beqonda isikhathi sokusebenzisa injini yokusesha njengokuphatha ubuhlobo nezinjini zokusesha ngokusebenzisa iziteshi zokukhangisa kanye nesofthiwe yokuhlaziya, abanye bathatha i-SEO njengokwakhiwa kokuqukethwe kokuqukethwe kanye nokwakha isixhumanisi.
Eqinisweni, ukuqonda i-SEO essence, udinga ukuba nesipiliyoni kulolu chungechunge. Ukusebenzisa injini yokusesha kuyinhlanganisela yekhwalithi nokuqukethwe okuyingqayizivele, okuyisisekelo sezobuchwepheshe (i-website yekhompyutha kanye nesakhiwo sangaphakathi), isipiliyoni esiphelele somsebenzisi esinesizinda negunya ku-Google. Kunamazinga angaphezu kuka-200 we-Google okudingeka uwalandele ngenkathi uthuthukise khona indawo yakho yokubukwa kwesayithi. Ngokucabangela zonke lezi zindlela ekuthuthukisweni komkhankaso wokwenza ngcono iwebhusayithi, uzokwazi ukuheha ithrafikhi ehlosiwe kusuka kuzinjini zokusesha bese ufika ku-TOP emiphumeleni yokusesha.
Ake sixoxe ngalokho okudingayo ukucabangela mayelana nesayithi lakho lokuthuthukisa injini yokusesha ukuze uphumelele.
Okudingekayo kwiSayithi okudingayo ukuba ucabangele nge-SEO engcono
Abaningi be-webmasters bagxila emizamweni yabo ekucwaningweni ngegama elingukhiye nokubekwa kwabo okulungile kulo lonke ikhasi. Kodwa-ke, uma ngabe usebenza ekusebenziseni kwakho amagama angukhiye kodwa ungenayo imiphumela ebonakalayo, kufanele ucabange ezinye izici ezithinta i-rankings ye-SEO.
i-algorithm ye-Google ayikho nje kuphela amanani akho angukhiye ehambisana nokusetshenziswa komethadatha kodwa futhi ihlola ulwazi njengabasebenzisi abasebenzisa isikhathi esichitha isayithi lakho, inani lamakhasi abheka ngalo, izinga lokunciphisa, amakhasi angatholakali, izixhumanisi eziphukile nokunye.
Indlela kuphela yokuphakamisa izinga lokuguqulwa nokuthola abasebenzisi ukuhlala kusayithi lakho ukuthuthukisa ulwazi lwabo nesayithi lakho. Njengoba isipiliyoni somsebenzisi kuyisici esibalulekile se-Google, kufanele ugxile ingxenye enkulu yesikhathi sakho nemizamo yokwenza isayithi lakho lilula futhi lihambisane nombuzo othile.
Ukuthuthukisa ulwazi lwabasebenzisi nokwenza isayithi lakho li-SEO-friendly, cabanga ngamasu alandelayo okuthuthukisa injini.
Ikhasi lakho lewebhu kufanele liphendule kahle liphendule ubukhulu bomshini womsebenzisi. Ngemuva kokubuyekezwa kwe-Google yakamuva, ukuphendula kwe-website kuba yindlela efanele yokusebenza ye-SEO ehlobene nokuphumelela kwebhizinisi le-intanethi. Udinga ukuhlinzeka ngokuhlelwa kwamasayithi kumadivayisi weselula namathebhulethi okungenzeka abekwe ngenye indlela njengenguqulo yedeskithophu yekhasi lewebhu.
Ngokudala umklamo ophendulayo, uthola ithuba lokukhomba inani elikhulu lamaklayenti akho angakhona njengoba kusesha kakhulu okuvela kumadivayisi eselula. Uma wakha iwebhusayithi entsha, kufanele iphendule ukuthuthukisa izikhundla nokuheha izivakashi eziningi. Uma ikhasi lakho lewebhu lamanje lingaphenduli, ungaphinda uvuselele ukuphendula noma ufake i-plugin mobile-friendly.
Udinga ukwenza isayithi lakho libandakanye kubo bonke abasebenzisi. Ukufinyelela kwewebusayithi kudinga amathegi we-ALT alungile kuzo zonke izithombe. Kuzokusiza ukuthi utshele bonke abasebenzisi mayelana nokuqukethwe kwakho futhi uzibandakanye ngokulandela isayithi lakho. Ngaphezu kwalokho, ukufinyeleleka kuqondene nokusetshenziswa okufanele kwamathegi enhlokweni njenge-H1 ye-header ehamba phambili ne-H2 yezihloko ezincane. Lawa makaki asiza ukuhlela okuqukethwe futhi akwenze kube lula ukukhwabanisa kokubili ukusesha bots kanye nabafundi.
Isici esinjalo sokuhamba njengama-breadcrumbs asiza abasebenzisi abakhubazekile futhi sibasize baqonde ukuthi bakuphi ekuqondeni kwesayithi lakho. Ngaphezu kwalokho, ikhwalithi ehlelwe ikhwalithi yenza bonke abasebenzisi kanye nezinjini zokusesha bakwazi ukuthola umbono ophelele wesayithi lakho Source .